Ejipta: Miady varotra amin’ny bilaogera hampitsahatra ny fanoherana ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2019 8:15 GMT
“Ho ao ambadiky ny masoandro ianao” no fiteny nampiasain'i Dean Abdul Hadi, Inspektera Jeneralin'ny Fiarovam-panjakana ao Fayoum (Faritany Ejipsiana), raha nanadihady ilay bilaogera Ejipsiana AbdelRahman Fares izy tamin'ny zoma 25 Septambra 2009, izay mibilaogy ao amin'ny Lesany Hoa elKalm (ny peniko no lelako).
Ora vitsivitsy talohan'izany, nanontany an'i Fares ihany koa ny major Tamer Adel mikasika ny fifandraisany amin'ny fitokonana izay hotontosain'y , mpirahalahy Miozolomana sy ny antoko politika El-Ghad amin'ny Oktobra 2009 – izay tsy fantatr'i Fares akory ny momba izany. Nandritra io fakàna am-bavany io, dia nanolotra toerana ara-politika an'i Fares ao amin'ny Antoko Nasionaly Demaokraty (antokon'ny fitondrana) ny major Tamer ary nampanantena hanondrotra azy ao amin'ny antoko, ho takalon'ny fialàna amin'ny asa hafa ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena. Tolotra izay nolavin'i Fares.
Nilaza i Fares nandritra ny antso an-tariby fa nametraka fanontaniana maromaro azy momba ny bilaoginy i AbdulHadi, ary nikitakita sy nandrahona azy hosamborina sy “ho ambadiky ny masoandro”, izay fiteny Ejipsiana ampiasaina mba handrahonana mafy olona iray fa higadra.